Àgwàetiti Vulcano nke Ịtali chụpụrụ n'ihi oke gas na-egbu egbu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Àgwàetiti Vulcano nke Ịtali chụpụrụ n'ihi oke gas na-egbu egbu
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi obodo Vulcano Marco Giorgianni egbochila ndị ọbịa na-abụghị ndị ọbịa si n'agwaetiti ahụ dịka nchekwa nchekwa.
N'okpuru ọhụrụ iwu, nke bịara irè taa, ndị bi ItalyAgwaetiti Vulcano enyela iwu isi n'ụlọ ha pụọ ​​kwa abalị maka ụbọchị 30 na-esote, n'ihi ihe egwu nwere ike ibute site na mgbawa ugwu.
Ndị bi na ya ga-apụrịrị n'ụlọ ha n'etiti elekere 11 nke abalị ruo elekere isii nke ụtụtụ n'oge obodo n'ihi nchegbu maka ikuku nwere ike igbu ndị sitere na ugwu mgbawa ugwu La Fossa.
Dị ka Giorgianni si kwuo, usoro ndị ahụ siri ike dị mkpa n'ihi na "amaghị nke ụra agaghị ekwe ka ndị bi na ya chọpụta ihe egwu dị na ya."
Vulcano, nke mebere akụkụ nke agwaetiti Aeolian, ga-amachibidokwa njem nlegharị anya maka ọnwa na-abịa. Ntugharị ndị a na-abịa otu ọnwa ka ụlọ ọrụ nchekwa obodo melitere ọkwa njikere ka ọ bụrụ “dị mkpa,” na ụbọchị ole na ole ka ụlọ ọrụ mba Italy maka Geophysics na Volcanology dọrọ aka ná ntị banyere ọkwa carbon dioxide “dị elu nke ukwuu” na ugwu mgbawa.
Ndị ọrụ gọọmentị n'agwaetiti ahụ kwupụtakwara ọnọdụ nsogbu n'akụkụ itinye usoro nchebe ahụ ma ọ bụrụ na enwere mmụba nke ọrụ mgbawa ugwu ma ọ bụ ikuku na-ebupụ na ikuku.
Igwe ọkụ nke ugwu mgbawa na-ewepụta pụtara na ọkwa oxygen dị n'àgwàetiti ahụ nwere ike ịdalata, nke nwere ike ịkpata nsogbu iku ume na-egbu egbu. A na-akọ na ọkwa carbon dioxide ebiliwo site na ọkwa nkịtị nke tọn 80 ruo ihe dị ka tọn 480, dị ka ndị ọkà mmụta mgbawa ugwu zoro aka na ya. AKA.
Àgwàetiti ahụ - aha ya bụ ngwakọta nke 'volcano' na 'Vulcan', chi ọkụ nke ndị Rom - enwetala mgbawa ugboro ugboro n'akụkọ ihe mere eme, na nso nso a site na 1888 ruo 1890.